Ampidino Flutter 1.0.0 ho an'ny Windows
Sehatra: Windows Version: 1.0.0 Fiteny: English
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (321.00 MB)
Ampidino Flutter, Rafitra fampandrosoana ny fampiasa aminny finday Flutter dia rafitra fampiroboroboana rindrambaiko avo lenta. Miaraka aminny programa tohananny Google, azonao atao ny mampivelatra ny rindranasa findainao haingana kokoa sy miasa kokoa. Azoko atao ihany koa ny milaza fa Flutter, izay rafitra tena ahazoana aina aminny lafiny fametrahana sy ny fampiasana azy, dia hankasitrahanireo mpamorona rindranasa finday.
Ampy ny fampidirana ani Flutter, izay manana rafitra kaody tsy manam-paharoa izay tena mora ianarana, aminny tetikasanao. Aorianity dingana ity dia azonao atao ny manatsara ny rindranasa findainao aminny fanovana majika vitsivitsy. Iray aminireo lafiny manararaotra indrindra ny Framework ny famoahana ireo sehatra iOS sy Android miaraka aminy.
Noho izany, ny fampandrosoana ny fampiharana dia azo atao aminireo sehatra roa miaraka amina tetikasa tokana.Flutter, izay tena mandaitra aminny fahombiazana, dia fampiharana izay tokony ho tsapanao tokoa. Azonao atao ny mampiasa Flutter maimaim-poana.
Haben'ny rakitra: 321.00 MB